Paris Saint-Germain oo bedelka Dani Alves ka dhex aragta kooxda Barcelona – Gool FM
(Paris) 25 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta PSG ayaa la soo warinayaa inay bedelka xiddiga ka socda ee Dani Alves ka dhex aragto naadiga Barcelona ee Waddanka Spain.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Spain kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa doonaysa inay xagaagan Barcelona ka soo qaadato Nelson Semedo si uu bedel ugu noqdo Dani Alves.
Dani Alves ayaa ka tagaya kooxda difaacanaysa horyaalka Ligue 1 ee Waddanka Faransiiska, waxaana uu ku baxayaa beeca xorta ah kaddib markii uu labo xilli ciyaareed ku qaatay garoonka Parc des Princes.
Kooxda ka dhisan Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaana doonaya inay da’yarkaan Semedo u soo qaataan booska uu ka baxayo xiddiga reer Brazil ee Alves.
Semedo heshiiskiisa uu haatan ku joogo garoonka Camp Nou waxaa kaga harsan saddex sanadood, laakiin kooxda PSG ayaa durba bilowday inay weydiisato isaga kooxda ka dheesha horyaalka La Liga.